Ndị uwe ojii Germany hụrụ bọmbụ ntu nke ụlọ na ụgbọ oloko njem ndị njem nke Cologne
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nchedo njem na Mberede » Ndị uwe ojii Germany hụrụ bọmbụ ntu nke ụlọ na ụgbọ oloko njem ndị njem nke Cologne
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ndị uwe ojii German achọpụtala mbọ a na-agba n’ụlọ na ụgbọ oloko ndị njem Cologne
Ndị uwe ojii nọ na obodo Cologne nke Germany kwupụtara na a hụrụ bọmbụ ntu a na-arụ n’ụlọ ụgbọ oloko mpaghara n’otu ntabi anya n’otu ụbọchị a na-eme usoro nhicha. Ndị uwe ojii mepere nyocha banyere mmalite nke ihe mgbawa na-adịghị mma ma chọọ ndị nwere ike ịche na mwakpo bọmbụ ụgbọ oloko
Otu onye na-ehicha ihe sitere na ọdụ ụgbọ oloko Deutzerfeld nke Cologne sụrụ ngọngọ na bọmbụ a na-eme n'ụlọ nke zoro n'ime igbe dị n'otu akụkụ mpaghara ụgbọ oloko ahụ n'abalị Fraịde, dịka ndị mgbasa ozi mpaghara si kwuo. A hụrụ ngwa agha ahụ gbawara n'ime ụgbọ oloko nke batara n'obodo ahụ site na obodo Gummersbach agbata obi, nke dị ihe dị ka kilomita 50 site na Cologne, tupu ụbọchị ahụ.
Ndị uwe ojii na ndị na-egwupụta ihe na-egwupụta ihe n’ime ụgbọ ala ahụ rutere ebe ahụ ozugbo kọwara bọmbụ ahụ dị ka “ihe na-agbawa agbawa na-agbawa agbawa.” IED ahụ nwere fiyuisi a kpụkọtara ya n’ime ihe ndị a na-akụ n’ekwú na ihe ntụ ntụ ojii nakwa mbọ na skru ndị jupụtara na ya. Ndị uwe ojii pụrụiche nke ndị uwe ojii jisiri ike kwụsị ya na saịtị ahụ ma ọ nweghị onye merụrụ ahụ na ihe ahụ.
Ndị uwe ojii ahụ dọrọ aka ná ntị na bọmbụ ahụ nwere ike imebi nnukwu ihe ma kpatara "mmerụ ahụ dị oke njọ" ọ bụrụ na ọ gaara agbami ndị njem ka nọ n'ụgbọala ahụ. N'agbanyeghị nke ahụ, ọnọdụ nke ihe ahụ merenụ abụbeghị ihe amabeghị. Ndị nyocha ahụ kwenyere na ọ nwere ike ịbụ mwakpo ndị na-eyi ọha egwu mebiri emebi site n'aka ndị otu aka nri ma ọ bụ ndị Islamist.
N'agbanyeghị nke ahụ, ndị uwe ojii ekwupụtabeghị na enwere ike iji bọmbụ ahụ mee ihe dị ka ihe iyi egwu ma ọ bụ dịka ụzọ isi nweta mkpuchi. O dozighi anya ma ọ bụrụ na ndị nwere ike ịda iwu hapụ IED n'ime ogige ụgbọ oloko tupu oge eruo iji tụọ ya na Day nke German Unity, nke a na-eme na Satọdee ma ọ bụ zubere imebi ya na Fraịde mana ngwaọrụ ahụ arụ ọrụ.
Ruo ugbu a, ndị uwe ojii enyochala ụgbọ oloko iri abụọ na asaa ahụ dọbara n'otu ebe ahụ ma na-arịọ onye ọ bụla hụrụ "ihe ọ bụla na-enyo enyo," ka kpọtụrụ ndị na-ahụ maka iwu.